Tuesday . 24 November . 2020
မင်းသမီးချောလေးပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုရရှိထားတဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့လက်ထပ်ထားတာဖြစ်ပြီး သုသုကတော့ အသက် (၉) နှစ်ကြီးတဲ့ခင်ပွန်းကို ကလေးတစ်ယောက်လိုချွဲတတ်တာကြောင့်လည်း ချစ်စရာကောင်းဆိုပြီးတော့ ပရိသတ်တွေက ပြောလေ့ရှိကြတာပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ခင်ကြင်နာကြတဲ့ သူတို့စုံတွဲကို ပရိသတ်တွေကအားကျနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သုသုကတော့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်သလို ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း ဂရုတစိုက်ထိန်းသိမ်းနေတာပါ။ အသားမစားဘဲဝိတ်ချနေတာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ သုသုတစ်ယောက်ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ချက်ကျွေးတာကိုစားဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေပုံရပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်း ဖေ့ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ “လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီး ကိုယ်လက်တွေကိုက်လို့ဆိုပြီးဆေးသောက်အိပ်လိုက်တာ မအိပ်စဖူးနေ့လယ်၁၁အထိအိပ်ပျော်သွားတယ်….. နိုးလာတော့ “ရော့….နေ့လယ်စာပြင်ပေးထားတယ်”ဆိုပြီး brunch in bed လေးကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးထားတော့….ဒီကဝတုတ်ပီတိတွေဖြာပေါ့…အသားမစားသော ဝိတ်ချနေတဲ့သူ့မိန်းမ အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားမှု…ဦးရေခဲ (၁၀၀)မှတ်” ဆိုပြီးတော့ ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အစားသောက်တွေနဲ့အတူ ရေးသားထားပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကတော့ ဂရုစိုက်တတ်သူခင်ပွန်းကိုရရှိထားတာကြောင့် အားကျနေတယ်ဆိုပြီးတာ့ မှတ်ချက်တွေလည်း ရေးသားထားတာပါ။ ဇနီးဖြစ်သူမင်းသမီးချောလေးကို ဂရုစိုက်အချစ်ပိုလွန်းတဲ့ ဒါရိုက်တာကြီးကတော့ အိမ်မှာစားဖိုမှူးကြီးဖြစ်နေတယ်ထင်ပါရဲ့နော်…
Source : PaingPhyopThu